Malaysia Dimalukan Lagi: Guardian Pecat Penulis Upahan Kerajaan Najib
The 'Homeless' Man
Kenyataan Media: Perletakan jawatan Joshua Trevino dari akhbar the Guardian dan taktik kewartawanan kotor yang ditaja BN
Media Statement: Joshua Trevino’s resignation from the Guardian and BN’s dirty news-fixing tactics
Right-To-Die Man Dies After Refusing Food
Observations at Malaysia Chess Festival 2012
Call to conduct audit on Second Bridge
Posted: 27 Aug 2012 09:39 AM PDT
Have you gottenaflat tyre before? What would you do when you haveaflat tyre?
1. Call AAM
2. Call friends to help
3. Call siblings
I haveaflat tyre on my way back from the Curve after my gym and snack last night. It was around 10pm. I was driving and suddenly i heardavery loud sound and my steering was tilt towards the left side of the car. So i quickly on the signal and stopped by the road... Oh no the tyre has just flatten.
WTH... THANKS TO MALAYSIA BOLEH POTHOLE.
Without wasting anytime, I transfered my laptop bag inside the car from the trunk, got hold of all the tools. And kick start the project.
The first thing i need to do is to locate the connector under the car to hold the Jack.
After i located the connector, i jacked up the car with the Jack and the given tools. Next was the unscrew part, unscrewing the4tighten nuts from the flat tyre was not an easy job. You need strength and tools. I was using leg to step, arm to pull to unscrew all4nuts.
Took out the flatten tyre and tried to fit the spare tyre on to the ring. The car was not high enough to place the spare tyre. So i continued to jack up the car until the spare tyre fit into the ring. Screwed the4nuts and made sure all the nuts were tighten. Again i have to use arm and leg to tighten the nuts. Of cause with the tools...
Anyway, it wasasecond workout for me and guess what? I figured out this was another type of workout which i wet my whole polo shirt and i felt the whole body muscle being worked out after i completed the project a.k.a changing the tyre.
I drove home safely "HOME SWEET HOME"
Posted: 27 Aug 2012 10:02 AM PDT
"Di bawah garis panduan kami, hubungan antara Joshua dan agensi sepatutnya didedahkan," kata Ketua Editor Guardian AS, Janine Gibson.
Najib telah membayar berjuta-juta pound agar FBC menjalankan "Kempen Komunikasi Strategik Antarabangsa", bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan pelaburan semasa perjanjian RM94juta untuk tiga tahun bermula 2007.
Demikian apabila hukum kebenaran dan keadilan berjalan. Pekung kerajaan Najib terdedah lagi sekalipun sebelum ini, kerajaan pusat berhempas pulas menafikan perbelanjaan besar digunakan untuk memperbaiki imej Najib.
Lebih menjelekkan penulis upahan Kerajaan Malaysia itu adalah seorang bekas penulis ucapan Bush dan pelobi pro-Zionis.
Nafikan lagi, lagi banyak Allah akan dedahkan pekong-pekong yang masih belum terbongkar.
Posted: 27 Aug 2012 10:55 AM PDT
PKR, PAS and DAP are now inatussle over who should contest more seats and where. While Kelantan will for sure see PAS dominating the state seats, DAP will want more say for Penang and PKR will want to keep Selangor and Kedah.
Pakatan de facto leader Anwar Ibrahim is under tremendous pressure. In his effort to get enough support from his two partners to enable him become the next prime minister, PAS dan DAP - now at odds over the hudud law - are adding to his headache.
PAS' Hadi Awang recently said his party would field more candidates in other states, particularly for the Parliament seats. Forasimple argument, should PKR and DAP fail to shine in the next general election, PAS will rule.
It is wrong to undermine PAS and its political strategy. Those who say PAS has no vision to formaFederal government are actually wrong.
PAS has long set that target. DAP and PKR and the whole nation are aware of it. And DAP is petrified by that idea because if PAS rules, hudud is unavoidable.
Having Kelantan and Kedah in its grip, PAS will pursue that desire and nothing can stop it. Not even Anwar who has to submit to PAS entry into Pakatan as he himself recognises how strong the 'Islamic party' is.
DAP too has to agree with the 3-corner political pact although deep inside, Lim Kit Siang, Karpal Singh, Lim Guan Eng and others hated the party so much. But as an avenue to avoid PAS getting much stronger than them, DAP and PKR were left to no choice but to admit PAS into the pact.
They realised then that PAS could stand on its own. Had PAS did so, it could have won more state and Parliament seats in 2008 national poll. And so, the distribution of seats was the only way to put PAS 'under control'.
And now, the allocation issue rises again.
PKR, which wanted to contest heavily in Sabah, has yet to findaformula to counter PAS for also wanting to try out more candidates in the state. DAP remains quiet, at least for the time being.
Penang is definitely out of PKR and PAS reach. In efforts to retain its power in the island state, DAP would want to contest in more state seats. Lim Guan Eng could compromise on Parliament seat with PKR but will not on state seats allocation.
Kedah's PAS embattled Azizan who saw no significant progress made to the state over the last four years, will also get full endorsement and support from PAS to have more candidates in the next poll. This is the only way to keep PAS dominance in the state, and DAP and PKR will have difficulty in dealing with hardliners like Hadi and Nik Aziz.
So, PKR will only have Selangor to defend. Even that, it has to sweet talk DAP. Khalid Ibrahim is having problems in controlling DAP's state assemblymen who 'bypass' his decision in many occasions.
It looks like Pakatan Rakyat needs more than justacompromise this time around. As PAS already got two states, DAP and PKR too would like to have more under their stable. While DAP is eyeing Perak and Johor, PKR is looking at Sabah, Pahang and Negri Sembilan.
ရခိုင်အရေးအခင်း နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြား ပညာရှင်တဦး၏ အမြင်-အင်တာဗျူး၊ အပိုင်း (၁) ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည်မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ် စရာ နာမည်သက်သက်ပါပဲ။ ဥာဏ်လင်း နှင့် ဇေယျာလှိုင်တွေ့မေးသည်။
"ပဋိပက္ခကအသစ်မဟုတ်ဘူး။ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတဲ့အနေအထားထိ ရောက်သွားတယ်"
MAWKUN – ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲ။
LEIDER – ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးက ရှိခဲ့တာကြာပါပြီ။ သိပ်မသုံးကြတာပဲရှိတယ်။ တချို့တွေပြောကြသလို ဒီစကား လုံးဟာ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကျမှ ထွင်ပြီးသုံးတဲ့ စကားလုံး တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာစ်မြစ်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၈ ရာစုအ ကုန်မှာ ဗြိတိသျှဆရာဝန် ဖရန်စစ်ဟမီလ်တန်ရဲ့ ဆောင်းပါးတစ် ပုဒ်ထဲမှာ ဒီအသုံးအနှုန်းကို သွားတွေ့တယ်။ သူကဘာပြောထား သလဲဆိုတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာ ရခိုင်မှာနေထိုင် ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အသုံး အနှုန်းဆိုပြီး ပြောထားတယ်။ ဘယ်ကနေ ဒီစကားလုံး ဆင်းသက် လာသလဲဆိုရင် ရခိုင်တွေကို ဘင်္ဂါလီတွေခေါ်တဲ့ ရိုရှန်း (Roshanga) ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီနာမည်ကနေ ဆင်းသက်လာတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို လှပအောင်စိတ်ကူး ယဉ်ပြီး ရှင်းလင်းချက်တွေ ထုတ်ချင်ကြတယ်။ အစောပိုင်း စာပေ တွေထဲမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကို တွေ့ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီအထောက်အထားတွေထဲမှာ ၁၈၇၀ မတိုင်မီက ရခိုင်မှာရှိကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားတာ က အတော့်ကို နည်းပါတယ်။
MAWKUN – စစ်တွေ၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောဧရိယာ တစ်ဝိုက်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေ လိုက်လုပ်ကြည့် သလောက်တော့ အဲဒီမှာ ဘင်္ဂါလီအတော်များများက ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားတောင်မကြားဖူးဘူးလို့ဆိုတယ်။ (သူတို့ ကို အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာ ဘာသာပြန်ကတစ်ဆင့်ပေါ့လေ။ ဘာ လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဘာသာစကားကို ကျွန်တော်တို့ နားမလည် လို့ဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားကိုလည်း သူတို့အတော်များ များ နားမလည်ကြဘူး။) နိုင်ငံတကာက သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး သိနေကြတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားလုံးကို အဲဒီဒေသကလူအများစု က ကြားတောင်မကြားဖူးကြဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။
LEIDER – ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တော့ အတည်မပြုနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ် ယောက်အနေနဲ့ အဲဒီဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောဒေသတွေကို သွားလို့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရော၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှာရော ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာက ရခိုင် ဒေသမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်အားလုံးက သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် ရည်òန်းပြောဆိုတာမျိုးကို မခံချင်ကြဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ရခိုင်မွတ် ဆလင်လို့ပဲ အခေါ်ခံချင်ကြတာတဲ့။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားနာမည်မဟုတ်ဘူး။ ခေါ်ဝေါ် စရာ နာမည်သက်သက်ပါပဲ။ မျက်မှောက်ခေတ်ကျမှ ရခိုင်ဒေသ က မွတ်ဆလင်တွေကို သီးခြားအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ခွဲထုတ်သတ် မှတ်ဖို့အတွက် ဒီစကားလုံးကို ပြည်လည်ဖော်ထုတ်လိုက်ကြတာပဲ။ ဘာနဲ့နှိုင်းလို့ရသလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ တရုတ်မွတ် ဆလင်တွေကိုခေါ်တဲ့ "ပန်းသေး" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့နှိုင်းရင် ရကောင်းရနိုင်တယ်။
MAWKUN — ပြည်ပက ဘင်္ဂါလီပညာတတ်တွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးကို လူသိများအောင် လုပ်နေကြတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေရှိ နေနိုင်လဲ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေပါလို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ် ကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံချင် နေကြတာက နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တောင်းဆိုလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေကြတယ် ဆိုပြီးတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယုံကြည် ထားကြတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
LEIDER – ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ မွတ်ဆလင်ခေါင်း ဆောင်တွေဟာ ဟိုးအရင်က ရခိုင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်မှာရှိခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်သမိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး သူတို့လူအစုအဖွဲ့ကို နာမည် တစ်ခုပေးနိုင်အောင် အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ ကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် တောင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေး တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်း ချိတ်ထားကြတယ်။ နိုင်ငံ တကာမီဒီယာတွေကလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို မွေး စားပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးလာကြပြီဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ရွေး ချယ်မှုဟာ မဟာဗျူဟာအရ အောင်မြင်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်လို့ မပြောကြပါဘူး။ မတောင်းဆိုကြဘူး။
LEIDER – အဲဒီအတွက် (ကျွန်တော်ဖြေမယ့်)အဖြေက ရေတိုအမြင်ကလာတာထက် ရေရှည်အမြင်ကနေလာတာပါ။ ဒီပဋိပက္ခက အသစ်မဟုတ်ဘူး။ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်။ ပြီးတော့ ပိုဆိုးတဲ့အနေအထားအထိ ရောက်သွားတယ်။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတော်များများကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လူဝင်၊ လူထွက် ကို ကြီးကြပ်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ဒေသကို လာရောက် အခြေချတဲ့ အိန္ဒိယအလုပ်သမားတွေကို ဗြိတိသျှက မထိန်းချုပ် ခဲ့ဘူး။ မတူညီတဲ့ လူအစုအဖွဲ့နှစ်ခုအကြား တင်းမာမှုတွေမြင့် တက်လာချိန် ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာကတည်းက ဒီနှစ်ဖွဲ့ အကြားမှာ အုပ်စုလိုက် ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမယ့်၊ ခိုက်ရန်တွေဖြစ် လာမယ့်အခြေအနေကို လေ့လာသူတွေ ကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ကြ တယ်။
MAWKUN – ရခိုင်ပဋိပက္ခကို ညွှန်းဆိုကြတဲ့အခါမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတချို့နဲ့ အချို့အဖွဲ့တွေက "လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (genocide)"၊ "တိုင်း ရင်းသား သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု (ethnic cleansing)" စတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးကြတာတွေ့ရတယ်။ The New York Times မှာပါသွားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ပါမောက္ခတစ် ယောက်ရေးတဲ့ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးမှာဆိုရင် "တိုင်းရင်း သားသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးသွားတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပကတိအခြေ အနေကို ထင်ဟပ်ကြ သလား။
LEIDER – အဲဒီလို အစွန်းရောက်တဲ့ ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ ဒီပဋိပက္ခ ဟာ ငါ့လူမျိုးက သူ့လူမျိုးထက်သာတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဆင်နွှဲတဲ့ စစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ဘာသာက ပိုကောင်းတယ် ဆိုပြီး တိုက်ကြခိုက်ကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး စစ်ပွဲဟာ (အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တိုက်ခိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေသုံးကြတာဟာ) ပဋိပက္ခရဲ့ သဘောသဘာဝကို ဖော်ပြရာမရောက်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်က ဘာလဲဆိုတော့ ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်တွေဟာ သူတို့မဖန်တီးတဲ့ သမိုင်းအခြေအနေတွေမှာ အတူ တူ အထားခံကြရတယ်။
Posted: 27 Aug 2012 06:08 AM PDT
၁)။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု မရှိနေ (သေး) ပါ။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးတုန်းသေစေမှုကို တွန်းပို့နေတဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ… သူတို့တွေ ဘာမှ ဝယ်လို့မရ ဘယ်မှ သွားလို့မရ တစ်သက်တာ ၂၄နာရီ မာရှယ်လော ရှိနေတာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ဒီအတိုင်းသွားရ် သူတို့တွေဟာ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ပိတ်မိနေပြီး များမကြာမီ သူတို့ဟာသူတို့ သေကုန်ကြနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းရောဂါကပ်၊ ငှက်ဖျား၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတွေ အတော်ကို ပြန့်နေပါတယ်။ မျက်စိရှေ့တင် အပြင်းအထန် ကယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကွယ်လွန်ကုန်သူတွေ ရှိပါတယ်။အိမ်သာ မရှိပါ။ သောက်ရေ၊ သုံးရေသန့် မရှိပါ။ ရေကန်အနီးမှာ မစင်ပုံတွေ ခြေချစရာ မရှိအောင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဆေးဝါး မရှိပါ။ တီဘီရောဂါသည် နဂိုက ဆေးသောက်အသက်ရှင်နေရသူတွေ ကြားထဲမှာ ဆေးမရလို့ ပိုးက ဆေးယဉ်သွားပါပြီ။
ခြင်ထောင်မရှိပါ။ မိုးက မရပ်မနား ရွာနေတာတောင် ခြင်က အံ့သြလောက်စရာ အဆုပ်လိုက်အဆုပ်လိုက် ပက်ပါတယ်။
အာဟာရပြတ်တဲ့ ကလေးလူကြီးတွေ မရေတွက်နိုင်အောင် ရှိနေပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံများပြပါတယ်။) ဗိုက်ပူနံကား ကလေးတွေပါ။ အသားခြောက်နဲ့ငါး စားရပေမယ့် မြက်ကလွဲလို့ ဘာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှ မရှိပါ။ မြက်ပဲ ဝါးစားနေရသူတွေ၊ ဘာမှကို စားစရာ မရှိလို့ အမေက ဆံပင်ဖြတ်ကျွေးတာကို စားခဲ့ကြရတဲ့ သားသမီးတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဆေးကုဖို့ ဆေးခန်းကို လာကြစဉ် အတင်း တိုးဝှေ့ နေကြတော့ နယ်ခံ ခေါင်းဆာင်က ကူထိမ်းပေးပါတယ်။ အနားတိုးလာသူ မှန်သမျှကို ဂျပန် ပါးရိုက်သလို ရိုက်၊ ကြိမ်နဲ့ ရိုက်ပြီး နောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းရပါတယ်။ အရိုက်ခံရတာကို (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ) နာကြပုံမပြပါ။ နွားများကဲ့သို့ သနားဖွယ် ပြုသမျှ ခံနေရပါတယ်။ အကြောက်လွန်ပြီး စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါမျိုး အများစုမှာ စွဲကပ်ကုန်ပါပြီ။
ဗမာစကား ဘယ်သူကမှ မပြောတတ်သလောက်နီးပါးပါ။ စကားပြန်နဲ့ မေးကြည့်တော့ ဗမာစကား၊ ရခိုင်စကားပြောခြင်း ဟရာမ်၊ ဝက်သားစားတာထက် အပြစ်ကြီးတယ်။ ပြောမိရင် ကာဖစ်ရ်လို့ မော်လဝီဆပ်များက အစဉ်အဆက် သင်ကြားထားတယ်လို့ သိကြရပါတယ်။
အများစုက ဘာစာကိုမျှ ရေးတတ် ဖတ်တတ် မရှိကြပါ။
မန္တလေးက ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ သိန်းထောင်ဂဏန်းဟာ တစ်ဦးစီအတွက် ဆန် နို့ဆီဘူး ခြောက်လုံးစာ၊ တစ်ဦးကို ပိုက်ဆံ ထောင်ဂဏန်း နည်းနည်းလေးပဲ ရခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ လက်ဝယ် မရကြသေးခင်အထိ သူတို့ ဘယ်လို နှစ်ပါးသွားကြရမယ် မသိပါ။
ဒီလူတွေဟာ လက်ရှိမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ နဂိုကနဲ့ မတူတဲ့ အခြေအနေဆိုးတစ်ခုနဲ့ ပိတ်မိပြီး အသတ်မခံရဘဲ သေကြရမယ့် အခြေအနေမှာ ရှိနေတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့တွေကို ကျွန်တော်တို့က သေနိုင်မှန်း သိသိကြီးနဲ့ လစ်လျူရှုကြရင် သူတို့ကို သွယ်ဝိုက် သတ်တဲ့ လူသတ်တရားခံထဲ ပါနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အရှင်အလိုတူရင် မကြာခင် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်သွားကြပါမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဖက်ကလည်း အစွမ်းကုန် ကူကြပါ။ အဓိက ကတော့ သူတို့အတွက် လတ်တလော အရေးပေါ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်မယ့် စားရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အမြန် ထပ်စီစဉ်ပေးကြရပါမယ်။
Reliable person told us in front of few dozen people
Posted: 27 Aug 2012 06:00 AM PDT
The "Homeless" Man
"Saya menziarah Allahyarham (Tun Ghafar) di rumahnya di Damansara berhampiran dengan bangunan Parlimen beberapa tahun lalu dan ditemani oleh sahabat saya, bekas ahli Jawatankuasa Pas Pusat, Ahmad Subky Abdul Latif.
"Ketika itu, tidak ada sesiapa di rumah kecuali isteri kedua Allahyarham, Toh Puan Dayang Heryati Abdul Rahim," katanya ketika dihubungi Sinar Harian Online, hari ini.
"Walaupun kami berbeza parti tetapi kami mempunyai hubungan yang baik," jelas beliau yang juga bekas Ahli Parlimen.
"Kali ini saya perlu berhati-hati sebelum mengulas apa-apa dan saya perlu meneliti kembali rakaman ucapan saya.
"Saya kena tengok dulu macam mana saya kata dan perkataan yang saya gunakan, mungkin ada perkataan 'dan' ke, ataupun 'koma', itu perlu diteliti," tegas beliau, yang dipercayai merujuk kepada kontroversi berkenaan kenyataan menyentuh peristiwa Bukit Kepong.
"Saya rasa lebih baik tanya tuan punya diri sendiri.Hanya dia dengan ALLAH sahaja tahu tujuan sebenar," katanya. -SH
Posted: 27 Aug 2012 02:23 AM PDT
SOURCE: ကမ္ဘာကို ဗြောင် မလိမ်ပါနဲ့ by ဌေးလွင်ဦး MM.net
ဇွန်လ အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မွတ်စလင်များကို သတ်ချင်တိုင်း သတ်၊ မောင်းထုတ်ချင်တိုင်း မောင်းထုတ်၊ မွတ်စလင်အိမ်များကို အကြီးအကျယ် မီးရှို့ခဲ့ပြီး–၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေး ၀ါဒီတွေက – သူတို့ရဲ့ ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်မှုများကို မွတ်ဆလင်များကို တစ်ဘက်သတ် ထိုးချခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကလည်း အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ညံသွားပြီး- တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျူးကျော် သူတွေက အတင်းအကြမ်းဖက်သလို ၀ါဒဖြန့်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံး အခြေအနေထိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေက ဖန်တီးလိုက်ယုံမျှ မက-၊ ဖြစ်နေဆဲ၊ ငတ်ပြတ် ပြေးလွှားနေဆဲကာလမှာ မြန်မာပြည်ထဲက သွားလေသမျှသော အလူများ အားလုံးကို ဗုဒ္ဓဘာသာများကသာ မောင်ပိုင်စီးလိုက်ပါတယ်။ မေတ္တာရှင် ဘုန်းကြီးများ ကလည်း ရခိုင်မှအပ ကျန်တာအားလုံးကို သေစေချင်စိတ် မျိုးပြုတ်လိုစိတ် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံကျော် နာရေး ကူညီမှု အသင်းကြီး အဓိကရုန်း ဖြစ်ရာ ဒေသကို ရောက်သွားတယ်၊ မွတ်ဆလင်တွေကို ကူညီခဲ့တာ လုံးဝ မတွေ့ပါ။ ၈၈ မျိုးဆက် ရောက်သွားတယ်၊ မွတ်ဆလင်များကို မကူညီတဲ့ အပြင် မလိမ်မိုးမာ တွေကလေးတွေကို ဆုံးမသလို ဆုံးမ နေလိုက်သေးတယ်။
အနုပညာရှင်များက ရခိုင်အတွက် ရံပုံငွေရှာပွဲတွေ ကျင်းပတယ်၊ မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် လုံးဝ လုံးဝ မပါခဲ့။ ဒီလို နာမည်ကျော် နာမည်ကြီး အဖွဲ့ကြီးများ လူမှုရေး အသင်းကြီးများသည်ပင်- ရခိုင်ဒုက္ခသည် ထက် အဆပေါင်းများစွာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်များဆီသို့ နှမ်းလေး တစ်စေ့မျှ မဖိတ်ခဲ့ပါ။
ရပ်ကွက်လိုက် မီးရှို့မောင်းထုတ် သုတ်သင်ခံရလို့ မိုးထဲလေထဲမှာ ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ရောက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင် များကို သွားရောက်ကူညီဘို့ ကြိုးစားတဲ့ ပြည်မက မွတ်ဆလင်များကိုလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခြိမ်း ခြောက်ပိတ်ပင် ဟန့်တား- အချိန်ဆွဲထားပြန်သေးတယ်၊ အကူအညီ တစ်ရက်နောက်ကျရင် မွတ်ဆလင် တစ် ရာ ပို သေသွားလည်း မနည်းဘူး- ဆိုတဲ့ အနောက်သား နိုင်ငံရေး ရခိုင်ဘုန်းကြီးများရဲ့ မေတ္တာကို ထုတ်ပြလိုက် ပြန်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အကုန်သိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့မိသားစုက အကူအညီ မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည် တွေဆီကို ရောက်အောင် ထိုးဖေါက်ပြီး အတင်းဝင်ကူညီတော့– (သူတို့ကို နာရေးအသင်း၊ ဘာအသင်း ညာ အသင်းများက ကူညီတဲ့ မြန်မာငွေ မဖြစ်စလောက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများနေတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ) ငါတို့ကိုတော့ မကူညီဘူးလို့– အရှက်မရှိ ထအော်ပြန်တယ်။ UN ကိုတောင် အလိုမရှိတော့ဘူး ဆိုပြီး ဆန္ဒပြလို ပြ– အတော်လည်း အရှက်သိက္ခာ မထိန်းနိုင်တော့ပါလား-။
UN ဆိုတာ- ဘယ်သူတွေက တစ်ကယ်လိုအပ်တယ်၊ ဘယ်သူတွေကတော့ တစ်ကယ်မလိုအပ်ဘူး- ရတာမြင် ရင်တောင်းစားချင်တဲ့ သူတောင်စားစိတ် ရှိသူများဖြစ်တယ်။ ဆိုတာ အသေးစိတ်သိနေသူများပါ။ သူတို့ရဲ့ ကွန်ယက်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးများက ကမ္ဘာ့အနှံ့မှာ နေရာချပြီးသား ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာလောက်တော့ သိဘို့ ကောင်းပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ မျိုးချစ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခံယူထားသူများကသာ ဗုဒ္ဓဘာသာက ပြောနေတဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ကရုဏာ တွေကို ပါးစပ်က ပြောနေသလို တစ်ကယ် လက်တွေ့ ကျင့်ကြံနေမယ် ဆိုရင် ဒီလို ပြသနာမျိုး အစက တည်းက ဖြစ်လာစရာ မရှိသလို၊- ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း လူလူချင်း ဒုက္ခသည်အားလုံးကို ညီတူမျှတူ ပံ့ပိုးခဲ့မှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အခြေအနေ ကိုယ့်ဘက်က ရှိနေလျှက်- တစ်ခြားတစ်ဘက်က ခွဲခြား မျက်နှာသာ လိုက်တာမျိုး ရှိရင် မျက်နှာလိုက်တတ်တဲ့ အဖွဲ့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တော်လှန်ပါ၊ ဆန္ဒပြပါ၊ ဆန့်ကျင်ပါ–။ အမှန်တရားကို ချစ်သူ တိုင်းက ထောက်ခံအားပေးမှာ သေချာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘေးဒုက္ခများ ဖြစ်တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း သင့်စဉ်က မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဘာကိုမှ မခွဲခြားဘဲ အမြောက် အများကူညီစောင်မခဲ့တယ်။ ရခိုင် ဂီရိ မုန်တိုင်းသင့်စဉ်ကလည်း ဆော်ဒီမင်းသားကိုယ်တိုင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်။ အခု အထိကရုန်းမှာလည်း တူရကီ (မွတ်ဆလင် နိုင်ငံက) မခွဲမခြား ကူညီခဲ့တယ်- ဆိုတာကိုများ – မြန်မာလူမှုရေး အသင်းများ-၊ ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ခံစားတတ်ရင် ရှက်ပြီး သေလိုက်ဘို့ ကောင်းနေပြီ။
လူဆိုး တစ်သိုက်ကြောင့် လူကောင်း အပေါင်း တစ်ကယ် ဒုက္ခရောက်ရခြင်းကို နှစ်ထောင်းအားမရ မရှိပါ။ အားလုံးကို ဒုက္ခဘ၀များက လွတ်မြောက်စေလိုပါတယ်။ အားလုံးကိုတည်း တတ်အားသမျှ ကူညီပြီး ဘ၀များ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဘို့ ဖြည့်ဆည်းပေးစေလိုတဲ့ ဆန္ဒလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်– ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာ နေသူများအတွက် ပြေးကပ်လာနေတဲ့ ဒုက္ခငရဲဝဲဂယက်ကြီးထဲမှာ- အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ မြုပ်ဝင်မသွားစေဘို့ ပြည်သူများကိုယ်တိုင်က ရှောင်ရပါမယ်။ လူကောင်း ဖြစ်လိုသူဟာ- ကုလားဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ဗမာဖြစ်ဖြစ် လူကောင်း လူကောင်းချင်း ပူးပေါင်းရဲတဲ့ သတ္တိများ လိုအပ်ပါမယ်။ လူဆိုးလူမိုက်များကို ဇွတ်ကြိုက်နေတဲ့ အကျင့်များကို ပြင်ဆင်ရပါမယ်။
လူဆိုးလူမိုက်များကို ကမ္ဘာက ပါးပါးလေး တစ်ကွက်လောက်ပဲ ထုတ်ပြပါသေးတယ်-၊ အခုပဲ အားလုံး အုံးအုံး ကျွက်ကျွက် အော်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေပါပြီ။ ဆက်ပြီးလိမ်၊ ဆက်ပြီးမိုက်- ဆက်ပြီး ဇွတ်တိုးမယ် ဆိုရင်–၊ နောက် ဆက်တွဲများစွာကို- ထောက်ခံနေသူ အားလုံး ခံစားရတော့မှာပါ။–
ကမ္ဘာကို ဗြောင်လိမ်ဘို့ ဆက်မကြိုးစားပါနဲ့-၊ မဆင်မခြင်ဘဲ ကမ္ဘာကို အာခံဘို့ မကြိုးစားပါနဲ့-၊ လူလိမ်တွေထဲက အဓိပတိခေါင်းဆောင်ကြီးကို ရွေးချယ်ပြီး- ကမ္ဘာကို ထွက် မေတ္တာရပ်ခံခိုင်းရင်လည်း-၊ အရှက်ကွဲရခြင်းနဲ့ပဲ ကြုံ သွားရပါတော့မယ်။-
Posted: 27 Aug 2012 04:05 AM PDT
"harga RM120 juta itu terlalu tinggi, kerana harga asal kedua-dua belah bumbung itu harganya RM34 juta sahaja, yang runtuhnya bukan kedua-dua (hanya) sebelah sahaja,
"kalau pun ada kerosakkan sampingan, takkan harga (membaikinya) naik (meningkat) sampai RM120 juta,"jelasnya.
Raja Kamarul Bahrin yang merupakan bekas arkitek perunding pembinaan SSMZA berkata demikian ketika diminta mengulas jawapan Pengerusi (Exco) Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan Awam negeri Terengganu Datuk Za'abar Mohd Adib pada sidang DUN 18 Ogos lalu.
Menurutnya, beliau dan ahli-ahli yang berhormat dari PAS telah beberapa kali meminta penjelasan dari Menteri Besar, Dato' Seri Ahmad Said mengenai pembaikian stadium tersebut.
"Kita (Adun-adun PAS) setiap kali sidang Dewan (Undangan Negeri) meminta penjelasan daripada Menteri Besar banyak kali (tentang) isu ini, diperingkat awal dia (MB) mengatakan semua kos tanggungan (pembaikian) akan ditanggung oleh pihak kontraktor,
"tetapi yang terakhir ini (pengumuman kos pembaikian) RM120 juta adalah jumlah yang cukup besar yang dari segi logiknya lebih baik bina satu stadium baru daripada memperbaiki yang ada,"ujarnya.
Perletakan jawatan Joshua Trevino, penulis the Guardian di Amerika yang penuh kontroversi telah menimbulkan semula isu obsesi pentadbiran BN bagi membayar konsultan bagi membina imej mereka di luar negara. Trevino dipaksa meletak jawatan apabila beliau didedahkan sebagai konsultan kepada FBC Media ketika beliau menulis sebuah artikel yang memuji imej 'Muslim sederhana' Datuk Seri Najib Razak's.
Malah tahun lepas Najib mengaku di Parlimen bahawa Kerajaan Persekutuan membayar RM94 juta kepada FBC Media antara 2007 dan 2010. Meskipun Najib cuba menjauhkan dirinya daripada taktik kewartawanan kotor FBC yang 'mengatur berita' apabila menerima upah daripada Kerajaan Malaysia, kedua-dua rangkaian media antarabangsa BBC dan CNBC menamatkan kontrak mereka dengan FBC Media memandangkan pelanggaran etika kewartawanan.
Selain daripada pentadbiran Najib, pelanggan lain FBC Media termasuklah rejim Hosni Mubarak sebelum kejatuhannya di Mesir dan kerajaan diktator Kazakhstan. Ketu Menteri Sarawak Tan Sri Taib Mahmud turut melantik FBC Meda untuk memulihkan imejnya yang telah tercemar dengan rasuah dan salahlaku alam sekitar.
Ironis sekali ketika mana pimpinan UMNO-BN menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Rakyat sebagai anti-Islam dan pro-Zionis di Malaysia, mereka melantik konsultan-konsultan yang dikenali kerana pandangan anti-Islam dan pro-Zionis yang ekstrim bagi menaikkan imej mereka di luar negara. Perlantikan Trevino oleh the Guardian telah dikecam oleh ramai aktivis Palestin memandangkan beliau pernah secara terbuka menghasut tentera Israel untuk membunuh aktivis flotilla Gaza.
FBC turut menyerang Ikhwanul Muslimun di dalam laporan mereka untuk BBC dan cuba mengaitkan Anwar dengan Ikhwan bagi menggambarkan Anwar sebagai ekstrimis Islam kepada media Barat.
FBC juga telah membayar AS$70,000 kepada APCO Wordlwide untuk melobi Kerajaan Amerika bagi pihak Kerajaan Malaysia.
Pada masa yang sama, insiden mengatur berita ini membolehkan media UMNO-BN di Malaysia untuk melaporkan bahan-bahan tersebut sebagai berita yang kononnya datang daripada sumber media yang berwibawa di luar negara.
Baru-baru ini Najib mengatakan pelbagai pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada pentadbirannya sebagai tanda pencapaian BN. Kontroversi FBC ini walaubagaimanapun membuktikan bahawa pengiktirafan ini sebenarnya 'dibeli' menggunakan wang rakyat. Sikap hipokrit untuk menggambarkan Anwar sebagai anti-Israel di luar negara tetapi boneka Zionis di Malaysia mendedahkan taktik cetek dan terdesak UMNO-BN.
Pada masa yang sama, skandal ini membuktikan bahawa pentadbiran hari ini menumpukan perhatian untuk mendapat pengiktirafan tidak bermakna dari luar bagi menutup kegagalan mereka menyelesaikan masalah di dalam negara. Jelas sekali pentadbiran Najib tidak mempunyai keutamaan yang sewajarnya dan hanya mampu menumpukan masa mereka terhadap fitnah dan penipuan, bukannya perubahan dasar.
Jika Najib benar-benar serius terhadap transformasinya dan imej progresif yang telah dibina oleh konsultan-konsultannya di luar negara, beliau seharusnya berterus-terang kepada rakyat Malaysia tentang peranan pentadbirannya di dalam skandal mengatur berita yang telah memburukkan imej negara.
Posted: 27 Aug 2012 01:29 AM PDT
The resignation of the Guardian's controversial American writer Joshua Trevino has again cast the spotlight on the BN Administration's obsession with paying consultants to boost their image abroad. Trevino was forced to resign as he was exposed for beingaconsultant to FBC Media, for which he wroteapiece lauding Datuk Seri Najib Razak's supposed 'moderate credentials'.
Datuk Seri Najib had in fact admitted in Parliament last year that the Federal Government had paid RM94 million to FBC Media between 2007 and 2010. While Najib has tried to distance himself from FBC's news-fixing tactics, both BBC and CNBC have terminated their contracts with the firm for breaching journalistic ethics.
Najib's administration hence joins an ignominious list that includes the government of Hosni Mubarak prior to its downfall and the Kazakhstan dictatorship as being clients of FBC Media. Tan Sri Taib Mahmud, the Chief Minister of Sarawak has also hired FBC Media to repair his image, which has been tainted by allegations of corruption and environmental violations.
It is ironic that while UMNO-BN leaders on the one hand attack Datuk Seri Anwar Ibrahim and Pakatan Rakyat for being anti-Islamic and pro-Zionist, they on the other hire consultants infamous for their extreme Islamophobic and hard-line Zionist views to boost their image abroad. Indeed, Trevino's appointment to the Guardian was criticized by many Palestinian and international activists due to his open incitement against the Gaza flotilla activists.
FBC had also attacked the Muslim Brotherhood in its reportage for the BBC and has tried to link Anwar to the Brotherhood.
FBC had also paid US$70,000 to APCO Worldwide to lobby the US Government on behalf of the Malaysian Government.
At the same time, these instances of news-fixing allowed UMNO-BN media in Malaysia to report the items as news that supposedly came from reputable media sources abroad.
Najib recently said that the various forms of international recognition given to his government areasign of BN's achievements. The whole FBC issue however shows that these endorsements were actually "bought" using taxpayer money. The hypocritical stance of portraying Anwar as anti-Israeli abroad while portraying him as an Israeli lackey back home exposes the hollow and desperate tactics of UMNO-BN.
At the same time, it also shows that the current administration is preoccupied not with solving the country's problems but with gaining dubious validation from overseas to cover up its lack of domestic achievements. This is surelyasign that Najib's administration has totally got its priorities wrong, and is addicted as well as obsessed with spin over substance.
If Najib is serious about his so-called reforms and the progressive image his consultants have so carefully cultivated for him abroad, then he ought to come clean to the Malaysian rakyat about his administration's role in the news-fixing scandal that has ironically tarnished the country's image.
Posted: 26 Aug 2012 11:50 PM PDT
BBC ONLINE: 22 August 2012
The 58-year-old was
Posted: 27 Aug 2012 01:06 AM PDT
Daging kucing memang enak dimakan, malah lebih lazat apabila dimasak kari," kata Jimmy, pemuda berasal dari Myanmar.
"Daging kucing yang dimasak kari sangat enak dicampur cili supaya lebih pedas," ujar Jimmy. Aduhai, tekak kami yang haus kerana berpuasa serta-merta bertukar loya tatkala membayangkan pemuda tersebut mengunyah daging haiwan itu.
"Jika di kampung saya, kucing menjadi lauk kebiasaan. Malah dagingnya selalu dimasak menjadi hidangan lazat di dalam majlis keraian. Kami akan berkumpul beramai-ramai dan menikmati daging kucing," ujarnya sambil menyifatkan bukanlah perasaan pelik ketika memakan daging kucing.
"Oh, begitu. Ini bermakna, di kampung kamu itu, kucing dipelihara untuk dijadikan makanan," soal kami sambil difikiran terbayang kucing panggang seperti yang diceritakan orang.
"Rakan-rakan serumah kamu makan kucing," tanya kami lagi.
"Ya. Rakan-rakan serumah saya juga menggemari daging kucing. Mereka selalu membawa daging kucing balik ke rumah untuk dibuat lauk yang enak," ujar Jimmy . Lagi sekali, tekak kami menjadi 'kembang'.
"Mereka beli kucing itu?" kami memancing satu persoalan.
"Oh, tidak," jawab Jimmy. Kemudian kami berdua saling berpandangan dan memperoleh jawapan sendiri di atas perbualan singkat dengan pemuda Myanmar itu di saat matahari sedang berada di tengah-tengah langit. -SH
Posted: 26 Aug 2012 08:21 PM PDT
It is no excuse but the truth. I've been finding myself more difficult to log into the Internet in the evenings ever since my wife started competing with me for the use of the home personal computer. What about the mornings and afternoon? Well, the real excuse is that I'm suffering fromalack of inertia.
Anyway, I was spending several days in Kuala Lumpur last week without my ipad2 or the heavier and bulkier Macbook or the netbook. I only had my mobile with me and I felt that it would be sufficient for me to surviveafew days away from Penang. No heavy-scale surfing but just enough connectivity to allow me to check my emails occasionally.
So what was I doing in KL? In particular, at the Cititel Midvalley. Anyone knowing me would know that I would invariably be at the Malaysia Chess Festival. I went there with halfamind to play in the tournament but at the last minute, I decided against it.
The format this year had changed fromalong time control to rapidchess games, and I was dead set against short time controls. I play chess to enjoy myself, not to suffer at the chess board, and I consider 25-minute games as pure masochistic. The rush of the adrenalin in the last 10 minutes ofachess game is not to my liking and the pressure has become too much for me. Why should I torture myself unnecessarily? I started realising this more than 15 years ago and that is why I've fought so shy of quick time control games in Penang and now in Kuala Lumpur.
The change in format was primarily due to one man: Dato' Tan Chin Nam through whose big generosity that the Malaysia Chess Festival has now completed its ninth edition. But for the first eight editions, all games were played at long time controls which allowed the tournament results to be submitted to the World Chess Federation for rating.
But this year, he decided that the Malaysia Chess Festival needed to be enlivened up and he insisted that the organisers turn the three signature events - the Arthur Tan IGB Malaysia open, the Lee Loy Seng seniors open and the Ambank chess challenge - into rapidchess events. Privately, I had told the organisers that this shouldn't be done but I guess their hands were tied. So word went out that the Malaysia Chess Festival would be different this year.
Disquiet from the international chess community came when the organisers receivedamessage from China that said they would not send any player to the Festival. Since eight years ago, the Chinese had been fervent supporters of the Malaysia Chess Festival and their close ties with Tan actually went back to 1974. People may not realise it but one of the reasons that China isachess powerhouse today is because of Tan and his Dragon project in the Seventies and Eighties.
Back to this message, the Chinese mentioned that they had been participating in the Malaysia Chess Festivals of previous years not because of the prize monies. If they wanted money, they already had lots of tournaments in China that now offer significant cash prizes. They told Tan that they came to play because of the title opportunities. Because rapidchess games cannot be registered with the World Chess Federation for title norms and qualifications, they decided not to take part this year. If ever there wasarude awakening for Tan, this must be it.
Faced with this dilemma, it was time for some damage control. It was too late to revert this Festival back to the traditional long time control. So what did the organisers do? They decided to stick with the rapidchess format but they combined all the three signature events into one big tournament. This wasamaster-stroke that saved the Festival.
I should mention that throughout the Festival, Tan was still trying to justify the change to rapidchess games. Before the first pawn was even pushed, he sought feedback from the participants whether the Malaysia Chess Festival should remainarapidchess event or change back to its original long format. From among the 180-plus participants, only about 12 players were in favour of rapidchess.
During the course of the tournament, he asked me to show him to some of the Filipino players - they were grandmasters and international masters - as he wanted to know their preferred format, and they all told him that they wanted rapidchess events. Of course they would say that. It did not surprise me. These Filipino players were basically mercenaries. Unlike the Chinese who valued titles and norms above everything else, the Filipinos were only interested to win cold, hard cash. That was all they wanted and if they could win cash prizes in the shortest time possible, so much the better. So why spend five or six days over long time-control games when they could win the same amount of money in three days over short time-control games? See their logic?
Emboldened by the Filipinos' response, Tan again asked the participants forafresh feedback at the closing ceremony. At first he asked for people who supported the short time control. Onlyahandful of players wanted that. I didn't bother to see whether or not they belonged to the Filipinos. Then he asked about long time control and the hall was filled immediately with raised hands. Not satisfied, he groped at the last straw and asked whether people would prefer one-hour games. Nobody raised their hands. So I guess that finally, the message sank in that long time-control games are what chess players want when they come down to Kuala Lumpur in August every year. Next year at its 10th edition, the Malaysia Chess Festival should be back to long time-control games and reclaim its stature asapremier chess tournament in this part of the world.
Chess aside, I must say that it was really good to meet up with all those chess fellas again: so many friends from among the chess players and the chess organisers. But of course, when I look at the faces of the younger local chess participants, I have come to realise that we are generations apart and the younger set do not know me at all. My definition ofachess generation is about six to seven years, the time it would takeaplayer to progress through his secondary schooldays. I would not be wrong to risk saying that there were at least six generations - possibly even more when the youngest players were about 10 years old and the oldest players were well in their eighties - of chess players in the tournament hall. But no matter the age difference, chess still remainsagame for everyone.
..during the worst days of the Great Depression and all of WWII. He was adored by many New Yorkers who took to calling him the "Little Flower," because he was so short and always woreacarnation in his lapel.
Someone beautifully said, "Sympathy sees and says, 'I'm sorry.'
Posted: 26 Aug 2012 08:08 PM PDT
"Ketika sampai di tempat kejadian api sedang marak di bahagian kios menjual makanan dan minuman serta tempat menyimpan barang pelanggan pasar raya berkenaan," katanya.
"Unit forensik masih lagi menjalankan siasatan bagi mengetahui punca sebenar kebakaran," katanya ketika dihubungi di sini, semalam.
Posted: 26 Aug 2012 04:40 PM PDT
Posted on 26 August 2012 - 09:07pmBy Alyaa Alhadjri (The Sun)newsdesk@thesundaily.comPETALING JAYA (Aug 26, 2012): The government has been urged to conduct an immediate audit into the construction of the Second Penang Bridge following last Friday's collapse of the Harbin Yangmingtan Bridge in Heilongjiang province, China.Kampung Tunku assemblyman Lau Weng San said this is because the contractor
U.S. Health Care Virus: Tests your system foraday, finds nothing wrong and sends youabill for $4,500.00.
Congressional Virus: The computer locks up, screens splits erratically withamessage appearing on each half blaming the other side for the problem.
Imelda Marcos Virus: Playsasong (slightly off key) on boot-up, then subtracts money from your Quicken account and spends it all on expensive shoes it purchases through eBay.
George Bush Virus: It starts by boldly stating, "Read my docs ... no new files!" on the screen then proceeds to fill up all the free space on your hard drive with new files, and blaming it on the Congressional Virus.
Paul Revere Virus: This revolutionary virus doesn't horse around. It warns you of impending hard disk attack - once if by LAN, twice if by C:.
Amish virus: As the Amish don't have any technology or programming experience, this virus works on the honor system. Please delete all the files from your hard drive and manually forward this virus to everyone on your mailing list. Thank you for your cooperation.
Adam & Eve Virus: Takesacouple bytes out of your Apple.